Igwe anaghị agba nchara eriri igwe Manufacturers - China igwe anaghị agba nchara eriri igwe Factory, Suppliers
202 oyi akpọrepu igwe anaghị agba nchara eriri igwe (0.2mm-3mm)
Ọkpụrụkpụ: 0.2mm - 3.0mm
Obosara: 600mm - 1500mm, ngwaahịa ndị ahụ dị warara dịka ịlele ngwaahịa
Max eriri igwe ibu: 10MT
301 oyi akpọrepu igwe anaghị agba nchara eriri igwe (0.2mm-3mm)
310s oyi akpọrepu igwe anaghị agba nchara eriri igwe (0.2mm-3mm)
409 409L oyi akpọrepu igwe anaghị agba nchara (0.2mm-8mm)
410 410s oyi akpọrepu igwe anaghị agba nchara eriri igwe (0.2mm-8mm)
430 Nzuzo akpọre igwe anaghị agba nchara Coils (0.2mm-8mm)
Obosara: 600mm - 2000mm, ngwaahịa ndị dị warara dịka ịlele na ngwaahịa
Imecha: 2B, 2D
A na-eme mpempe akwụkwọ agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba ihu ta ihu igwe. Isi ngwaahịa bụ agba igwe anaghị agba nchara mpempe akwụkwọ mbadamba na igwe anaghị agba nchara ji achọ mpempe akwụkwọ. Agba igwe anaghị agba nchara na-arụ ọrụ teknụzụ na nhazi nka na mpempe akwụkwọ igwe anaghị agba nchara, na-eme ya mpempe akwụkwọ eji achọ mma nwere agba dị iche iche n’elu.
304 igwe anaghị agba nchara bụ vasatail igwe anaghị agba nchara, nchara na-egosi arụmọrụ karịa 200 usoro nke igwe anaghị agba nchara ike. Igwe ọkụ dị elu dịkwa mma, nwere ike ịdị elu na 1000-1200 degrees. 304 igwe anaghị agba nchara nwere ezigbo igwe anaghị agba nchara corrosion eguzogide na mma iguzogide intergranular corrosion. Nke oxidizing acid, na nnwale ahụ kwubiri na: ịta ≤ 65% nke nitric acid n'okpuru mmiri ọkụ, 304 igwe anaghị agba nchara nwere ike corrosion eguzogide. Ihe ngwọta nke Alkali na ọtụtụ mmiri acid na acid inorganic nwekwara ezigbo mmebi nke corrosion.
430 igwe anaghị agba nchara bụ n'ozuzu-nzube ígwè na ezi corrosion eguzogide. Omume ya dị mma karịa nke austenite. Ọnụ ọnụọgụ nke mmụba ọkụ dị obere karịa nke austenite. Ọ na-eguzogide ike ọgwụgwụ nke ọkụ ma gbakwunye ya na titanium. Ngwongwo igwe nke weld dị mma. 430 igwe anaghị agba nchara maka mma ụlọ, mmanụ burner akụkụ, ngwa ụlọ, akụrụngwa akụrụngwa. 430F agbakwunyere na 430 nchara ihe nfe nfe nchara nke igwe, tumadi maka akpaka lathes, bolts na nuts. 430LX Na-agbakwunye Ti ma ọ bụ Nb na 430 ígwè iji belata ọdịnaya C ma melite arụmọrụ na weldability. A na-ejikarị ya eme ihe na tankị mmiri ọkụ, sistemụ mmiri ọkụ, ngwaahịa dị ọcha, ngwa ngwa ụlọ, ịnyịnya ígwè wdg.
Igwe anaghị agba nchara mpempe akwụkwọ 304
304 igwe anaghị agba nchara bụ a nkịtị ihe na igwe anaghị agba nchara, njupụta nke 7.93 g / cm3, makwaara dị ka 18/8 igwe anaghị agba nchara.High okpomọkụ na-eguzogide 800 ℃, na ezi nhazi arụmọrụ, elu ike, ọtụtụ-eji na ụlọ ọrụ na ngwá ụlọ mma ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ nri na ọgwụ.
Labelzọ ịdebanye aha na ahịa gụnyere 0Cr18Ni9 na SUS304, nke 0Cr18Ni9 pụtara usoro mmepụta mba, 304 n'ozuzu pụtara mmepụta ọkọlọtọ ASTM, na SUS304 pụtara mmepụta ọkọlọtọ kwa ụbọchị.
316 bụ igwe anaghị agba nchara pụrụ iche, n'ihi mgbakwunye nke Mo ọcha na corrosion eguzogide, na elu okpomọkụ ike ka ukwuu mma, elu okpomọkụ ruo 1200-1300 degrees, ike ga-eji n'okpuru ọjọọ ọnọdụ.
NO.4 bụ nke a na-ehicha ma ọ bụ na-egbu maramara, ọ dị ka HL elu, ma ọ dịtụ iche, na-abụkarị ma anyị chọta akara ogologo ma gaa n'ihu ọ bụ HL, nke ọzọ bụ NO.4 ma ọ bụ NO.3, NO.5. wdg.